Abahambi abangagonyiwe abavela e-UK, eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus kumele babe nokuhlolwa okungahambi kahle kwehora le-24 kwe-COVID ukungena eFrance
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » France Izindaba Ezintsha » Abahambi abangagonyiwe abavela e-UK, eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus kumele babe nokuhlolwa okungahambi kahle kwehora le-24 kwe-COVID ukungena eFrance
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zaseCyprus • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Greece Izindaba Ezintsha • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseNetherlands • Izindaba • IPortugal Izindaba Ezintsha • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking • Izindaba Ezihlukahlukene
UNdunankulu waseFrance uJean Castex umemezele ukuthi imingcele yabahambi abagonyiwe iyasuswa ngoMgqibelo.
IFrance idinga ukuhlolwa kwamahora angama-24 kwe-coronavirus engeyinhle yezihambi ezingagonyiwe ezivela emazweni ase-UK nase-5 EU.
Izivakashi zase-UK ezingagonyiwe, umnqamulajuqu wesivivinyo esibi se-COVID-19 wehlisiwe kusuka emahoreni angama-48 ngaphambi kokuhamba kuya emahoreni angama-24.
Isikhathi esinqunyiwe sezivakashi ezingagwetshiwe ezivela eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus sehlisiwe kusuka emahoreni angama-72 kuya kwangama-24
Iziphathimandla zaseFrance zimemezele ukuthi izivakashi ezingagonyiwe ezivela e-UK, eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus kuzofanele zifake i-PCR engeyinhle noma i-antigen test ye-COVID-19 ethathwe ngaphansi kwamahora angama-24 ngaphambi kokuhamba kwabo ngaphambi kokuba bavunyelwe ngena France.
Okokugoma UK izivakashi, umnqamulajuqu wokuhlolwa okungalungile kwe-COVID-19 wehlisiwe kusuka emahoreni angama-48 ngaphambi kokuhamba kuya emahoreni angama-24.
Umnqamulajuqu ofanayo wezivakashi ezingagwetshiwe ezivela eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus wehliswa wasuka emahoreni angama-72 waya kwangama-24.
Ushintsho kuzidingo zokungenela luqale ukusebenza ngoMsombuluko, Julayi 19.
Ngasikhathi sinye, uNdunankulu waseFrance uJean Castex umemezele ukuthi imigoqo yabahambi abagonyiwe iyasuswa ngoMgqibelo.
"Imithi yokugoma iyasebenza ukulwa naleli gciwane, ikakhulukazi okuhlukile kweDelta," kusho uNdunankulu, enezela ukuthi abahambi abavela emazweni asohlwini lwaseFrance olubizwa ngokuthi 'uhlu olubomvu' kusamele bazihlukanise izinsuku eziyisikhombisa noma ngabe begonyiwe.
Ushintsho kumgomo wokungena eFrance luza ngemuva kosuku i-UK ikhiphe iFrance ngaphandle kohlelo lwayo lokuvumela ukuthi iBrits egonywe ngokuphelele igweme ukuvalelwa yodwa lapho ibuya emazweni 'ohlu lwama-amber'.
Abantu abafika bevela eFrance kusazodingeka bazihlukanise izinsuku eziyishumi bese behlolwa kabili ngenxa yokudlanga kohlobo lweBeta, olwalwaziwa ngokuthi okuhlukile kwaseNingizimu Afrika, kusho izikhulu.
"Besilokhu sicacile ukuthi ngeke sinqikaze ukuthatha izinyathelo ezisheshayo emingceleni yethu ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 nokuvikela okuzuziwe ngohlelo lwethu lokugoma oluyimpumelelo," kusho uNobhala Wezempilo e-UK uSajid Javid.
UMengameli waseFrance u-Emmanuel Macron uthe kuleli sonto bonke abasebenzi bezempilo kumele bagonywe ngoSepthemba 15, kuyilapho ososayensi bezwe bethi kumele kugonywe wonke umuntu.
Ngokusho kukahulumeni, sekukonke, ama-55% abantu baseFrance bagonywe ngokuphelele.
Amazwe we-UNWTO adinga ukusindiswa kanye nezimpendulo ze-Saudi Arabia ...
STOP: amazwe angama-80 afaka i-UK, i-UAE, iFrance, i-Israel ...
Abangane nezihlobo ezivakashelayo bazoshayela ukuhamba ...